#NABShow တွင် Cloud တွင်ထုတ်လုပ်ရန် Broadcast Beat @forbiddentech | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » Forbidden Technologies က @forbiddentech နှင့်အတူ #NABShow မှာတိမ်တိုက်ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လွှင့် Beat
Forbidden Technologies က @forbiddentech နှင့်အတူ #NABShow မှာတိမ်တိုက်ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လွှင့် Beat
စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပို့ဆောင်အပေါ်ရည်ရွယ်ချက်, အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း - www.broadcastbeat.com - ထို Hi-tech တိမ်တိုက်-အခြေပြုတည်းဖြတ်ပလက်ဖောင်း "၏ပံ့ပိုးပေး - Forbidden Technologies က၎င်း၏မိတ်ဖက်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်FORscene။ "
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) မတ်လ 25, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" နဲ့ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ် တားမြစ်ထား Technologies က။ - "၏ဖန်တီးသူFORscene"(တိမ်တိုက်-based တည်းဖြတ်ပလက်ဖောင်း) နှင့်ကဲ့သို့သောအခြားထုတ်ကုန်များ," Clesh "(ဗွီဒီယိုနှင့်အကြောင်းအရာမျှဝေခြင်းဝန်ဆောင်မှု) ။
"တိမ်တိုက်-based Workflows နည်းပညာနှင့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်အဖြစ်ကိုပိုမိုပျံ့နှံ့ဖြစ်လာနေကြတယ်" ဟုရိုင်ယန် Salazar ကဤသို့ဆို၏, အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းတည်ထောင်သူနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Editor ကို Beat ။ "တစ်ဦးကို Web browser ကနေ feeds တွေကိုတည်းဖြတ်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, ပြီးတော့သွားရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရပ်မှအကြောင်းအရာကိုဖြန့်ဝေသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သူများကသူတို့အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ဖို့စွမ်းရည်ပေးခြင်း, တန်ဖိုးရှိသောအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံနှစ်ဦးစလုံးကယ်တင်တော်မူ၏။ "
တားမြစ်ထား Technologies က နှင့်အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat လာမည့် 2014 များအတွက်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခဲ့ကြ NAB ပြရန် အဆိုပါ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာ Las Vegas မှာ, Nevada ဧပြီလ 5-10, 2014 ၌တည်၏။ တားမြစ်ထားအသံလွှင့်အဘို့င်း၏ဆုရ cloud-based တည်းဖြတ်ရေးပလက်ဖောင်းပေးသွားမှာပါ Las Vegas မှနှင့်ဝိန်း Fort Lauderdale, Florida တွင်တည်ရှိပြီးသူတို့ရဲ့ဝေးလံခေါင်သီ Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအတွက်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ On-တည်နေရာကိုဗီဒီယိုအမှုထမ်း Beat ။ အဆိုပါသင်္ဘောသားဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့အညွန့်အကြားမိုဃ်းတိမ်ထဲသို့ upload တင်ပါလိမ့်မယ်။ ဝိန်း Fort Lauderdale တွင်ထုတ်လွှင့် Beat ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံထို့နောက် '' တားမြစ်ထား Technologies ကနေတဆင့်မိုဃ်းတိမ်၌ကြောင့်ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်စတင်မည် FORscene ပလက်ဖောင်းကိုတည်းဖြတ်။
တစ်ဦးက web-based ပလက်ဖောင်းဟာ့ဒ်ဝဲ-လွတ်လပ်သော applications များနှင့် instant အသုံးပြုမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာအသုံးပြုသူများကို Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကွန်ယက်ကိုဖြေရှင်းချက်အတွက်အဆုံးစွန်ဒီအောင်, အချိန်မရွေး / ဘယ်နေရာမှာမဆို content တွေကို access နိုင်ပါတယ်။ ကလစဉ်ကြေးနှင့်အတူ SaaS ( "တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ") ရဲ့ကြောင့်, မစျေးကြီးကို up-ရှေ့ကုန်ကျစရိတ်နှင့်၎င်း၏မြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုသာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ရှိပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်, အားကစားနှင့်သတင်း application များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာမဟာဗျူဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အခြားစနစ်တွေနဲ့ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုအလေးအနက်ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒါဟာအနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ cloud-based software ကိုအမြဲ up-to-date ဖြစ်အောင်လက်ရှိတည်းဖြတ်မူများကိုနှင့်အတူထားရှိမည်ကြောင့်မရှိတော့သငျသညျ, သင့်ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်တော်မူမည် မဟုတ်သလိုသင်အပ်ဒိတ်ဒါမှမဟုတ်ခေတ်မမီတော့မွေ format နဲ့၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့လုပ်ငန်းအသွားအလာရပ်တန့်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့, ဖောက်သည်တားမြစ်ထား Technologies က '' ဆည်းကပ်မကြာသေးမီကယင်း၏ဈေးကွက်-ဦးဆောင်ပလက်ဖောင်းအသစ် features တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ အားလုံးအသစ်က features တွေအဖြစ်တားမြစ်ထားရဲ့အသစ်လိုဂိုနှင့်တံဆိပ်, အ 2014 မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် တဲ SL5305 ၌တည်၏။
တားမြစ်ထား Technologies က plc အကြောင်း
တားမြစ်ထား Technologies က plc ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် cloud အခြေခံဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ကယ်လွှတ်တတ်ထားတဲ့ဆုရနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူ့ရဲ့ flagship ထုတ်ကုန်, FORsceneကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based ကိုဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2004 အတွက် IBC မှာဖြန့်ချိ, FORscene , log တည်းဖြတ်, ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာထက်ပိုမို3သန်းနာရီထုတ်ဝေရန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Atos, information model ရဲ့, deltatre အပါအဝင် High-profile ကိုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတားမြစ်ထားသည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းအခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်အပေါ်ကိုးကား Technologies ကမိတ်ဖက် EVSနှင့် Key ကို Code ကိုမီဒီယာတစ်ဦးဝေးကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိသည်။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက FORscene www မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။forscene.co.uk ။ တားမြစ်ထား Technologies ကအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက www.forbidden.co.uk မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းကိုကြီးစွာသောထုတ်ကုန်သိတယ်နဲ့တားမြစ်ထား Technologies ကကဲ့သို့သောဒဏ်ငွေနည်းပညာကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူပူးပေါင်းခံရဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ် Beat ။ www.forbidden.co.uk/.
2014 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်း Beat တားမြစ်ထား Technologies က FORscene FORscene တားမြစ်ထား Technologies က Las Vegas မှ NAB ပြရန် Show ကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်း NAB NAB ပြရန်, Las Vegas မှာ, Pamela Kleibrink Thompson က, Pamela Kleibrink Thompson က 2014-04-03
ယခင်: #NABShow 2014 ပါတီများ & Events များစာရင်း
နောက်တစ်ခု:5အကူအညီ NAB ပြရန် 2014 အရင်းအမြစ်များ